Arduino + Bluetooth, tusaalooyin iyo xalka mashaariicda shaqsiyadeed | Qalabka bilaashka ah
Isgaarsiinta ka dhexeysa looxyada elektarooniga ah waa wax aan dhamaanteen ugu baahanahay waqti cayiman oo loogu talagalay mashaariicdeena. Sidaa awgeed, mashaariicda sida IoT ama Internetka Waxyaabaha ayaa soo ifbaxay si loo abuuro aalado casri ah. Laakiin dhammaantood waxay u baahan yihiin loox leh xiriir wireless sida Bluetooth ama wireless. Marka xigta waxaan kuu sheegeynaa waxa Arduino + Bluetooth yahay iyo fursadaha ama mashaariicda lagu sameyn karo tikniyoolajiyadan.
1 Waa maxay Bluetooth?
2 Maxay yihiin guddiyada Arduino ee leh Bluetooth?
3 Maxaan ku samayn karnaa Arduino + Bluetooth?
4 Wifi ama Bluetooth loogu talagalay Arduino?
Waa maxay Bluetooth?
Suurtagal by hadda qof walba wuu ogyahay tiknoolajiyada Bluetooth, teknoolojiyad wireless ah oo noo ogolaaneysa inaan isku xirno aaladaha si aan si dhaqso leh oo hufan ugu dirno xogta dhexdooda ah looma baahna bar kulan ama router. Teknolojiyadaani waxay ku dhex jirtaa aalado badan oo mobilo ah, laga bilaabo kiniiniyada ilaa qalabka sida samaacadaha dhagaha ilaa walxaha sida taleefannada casriga ah ama kombiyuutarada desktop.
Tikniyoolajiyada Bluetooth iyo sidoo kale isku xirnaanta wireless-ka ayaa muhiim u ah internetka waxyaabaha, ma ahan oo kaliya maxaa yeelay waa qeyb aasaasi ah laakiin maxaa yeelay aaladaha kala duwan ee leh Bluetooth waxay ka dhigayaan shabakada ama mesh-ka xogta udhaxeysa aaladaha mid sax ah oo aan ku xirneyn qodobo aad u badan la kulanka ama nodeyaasha xogta. Waxaas oo dhan, teknoolojiyada bluetooth aad ayey ugu jirtaa mashaariicda leh Arduino, IoT iyo xitaa moodooyinka ugu dambeeya ee Raspberry Pi.
Waxaa jira noocyo badan oo bluetooth ah, mid walbana wuxuu ku fiicnaanayaa kii hore dhammaantoodna waxay bixiyaan natiijooyin isku mid ah laakiin si dhakhso leh iyo tamar yar. Sidaas darteed, Arduino + Bluetooth waa iskudhafka ugu badan ee laga isticmaalo adduunka farsamada.
Si kastaba ha noqotee, hadda ma jiro nooc ka mid ah Arduino UNO taas oo ka kooban bluetooth asal ahaan iyo in isticmaale kasta uu u isticmaali karo tikniyoolajiyaddan asal ahaan. Tani waa wax ay tahay inaan ka helno gaashaan ama kaararka ballaarinta ama moodooyinka khaaska ah ee ku saleysan Mashruuca Arduino.
Dhawaan adeeg cusub ayaa loo sameeyay aaladaha leh teknolojiyada Bluetooth, tan ayaa sal ku leh iyadoo la adeegsanayo aaladaha Bluetooth-ka sida shumaca ama aaladaha fudud ee soo daaya signaal markasta. Nidaamkan nalka ama nalka ayaa ka dhigaya aalad kasta oo caqli badan inay soo uruuriso calaamadaha noocan oo kale ah ayna u oggolaato dhul-dhigis iyo sidoo kale macluumaad gaar ah oo lagu heli karo oo keliya teknoolojiyada sida isku xirka 3G ama barta marin-u-helka wireless.
Maxay yihiin guddiyada Arduino ee leh Bluetooth?
Sidii aan horey u soo sheegnay, maahan in dhammaan looxyada Arduino ay yihiin kuwo ku habboon bluetooth-ka, halkii, maahan in dhammaan moodooyinka ay ku xirmaan boodhadhka guddigooda. Tani waa sababta oo ah tiknoolajiyaddu uma dhalan bilaash sida teknoolojiyadda kale oo dhammaan mashaariicda Arduino uma baahna bluetooth, sidaas ayaa lagu go'aansaday dib ugu celiso shaqadan gaashaammada ama looxyada ballaarinta ee jira kuna xirnaan kara gole kasta oo Arduino ah oo si isku mid ah ugu shaqeeya sidii haddii lagu hirgeliyey Motherboard-ka. Iyadoo ay taasi jirto, waxaa jira moodello leh Bluetooth.
Qaabka ugu caansan uguna dhow waxaa loo yaqaan Arduino 101. Saxankan ayaa dhacaya guddigii ugu horreeyay ee Arduino leh Bluetooth, oo loo yaqaan Arduino Bluetooth. Labadan saxan waa inaan ku darnaa BQ Zum Core Guddi Arduino aan asal ahayn laakiin ku saleysan mashruucan iyo asal ahaan Isbaanish. Saddexdaas guddi waxay ku saleysan yihiin Arduino Project waxayna leeyihiin awood ay ku wada xiriiraan bluetooth. Laakiin maahan tan kaliya ee lagu beddeli karo sidaan soo sheegnay. Waxaa jira seddex taariko oo dheeri ah Waxay ku daraan shaqada Bluetooth. Kordhintaas Waxaa lagu kala magacaabaa Bluetooth Shield, Sparkfun bluetooth Module iyo SeedStudio bluetooth Shield.
Looxyada ku leh Bluetooth qaabeynta aasaasiga ah, kuwa aan kor ku soo xusnay, waa aalado salka ku haya saldhigga Arduino UNO a module Bluetooth ah waxaa lagu daray in uu la xiriiro guddiga intiisa kale. Marka laga reebo Arduuino 101, moodeel si aad ah isu beddela marka loo eego guddiyada kale ee Arduino maaddaama ay leedahay qaab dhismeed 32-bit ah, oo ka awood badan moodooyinka kale ee ku jira Arduino Project. In kastoo xaqiiqda, tirada taarikada ayaa si weyn loo yareeyay maadaama nooc ka mid ah aan dib loo iibin ama loo qaybin oo waxaan ku gaari karnaa oo keliya dhismaheeda farsamada gacanta, sida ku dhacday Arduino Bluetooth, oo aan ku gaari karno keliya dokumentigiisa.
Xulashada kordhinta ama Gaashaanka Bluetooth waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay waxay u ogolaaneysaa dib u isticmaal. Taasi waa, waxaan u adeegsanaa guddiga mashruuc cayiman oo adeegsanaya bluetooth ka dibna waxaan dib ugu isticmaali karnaa gudiga mashruuc kale oo aan lahayn bluetooth kaliya adigoo furaya kordhinta. Qaybta taban ee habkan ayaa ah in fidintu ay mashruuc kasta ka dhigeyso mid aad qaali u ah maadaama ay u egtahay inaad iibsatay laba loox Arduino in kastoo asal ahaan mid uun shaqeyn doono.
Maxaan ku samayn karnaa Arduino + Bluetooth?
Waxaa jira mashaariic badan oo aan ku isticmaali karno guddiga Arduino laakiin waxaa jira in yar oo u baahan isgaarsiin. Maaddaama aan hadda ka heli karno qalab kasta oo smart ah oo leh bluetooth, waxaan ku beddeli karnaa mashruuc kasta oo u baahan marin u helka internetka guddi leh Arduino Bluetooth oo waxaan ku soo diri karnaa internetka adoo adeegsanaya Bluetooth. Waxaan sidoo kale awoodnaa abuuro ku hadla smart mahadsanid Arduino + looxyada Bluetooth ama abuur shumacyada si juquraafi ahaan loogu helo qalab. Baahnayn in la sheego qalabyada sida teebabka, jiirka, samaacadaha, makarafoonada, iwm ... waxaa lagu dhisi karaa iyadoo la adeegsanayo qalabkan elektaroonigga ah, maadaama hadda nidaam kasta oo qalliinka ku shaqeeya uu si sax ah ula shaqeeyo tiknoolajiyada bluetooth.
Meelaha caanka ah ee lagu kaydiyo sida Tilmaamaha waxaan ka heli karnaa mashaariic aan la soo koobi karin oo adeegsada Bluetooth iyo Arduino iyo mashaariicda kale ee aan isticmaalin Arduino + Bluetooth laakiin taasi waxay kula shaqeyn kartaa isbedelada ku habboon.
Wifi ama Bluetooth loogu talagalay Arduino?
Wifi ama Bluetooth? Su'aal wanaagsan oo dad badani isweydiin doonaan, maadaama mashaariic badan wixii isku xidhka Wi-Fi sameeyo, isku xidhka Bluetooth sidoo kale wuu samayn karaa. Guud ahaan, waa inaan ka hadalno faa'iidooyinka iyo dhibcaha xun ee labada tiknoolajiyad, laakiin xaaladdan, mashaariicda lala jiro Arduino, waa inaan eegno cunsur aad muhiim u ah: kharashka tamarta. Dhinaca kale, waa inaad fiirisaa waxa tamarta ah ee aan haysanno oo aan halkaa ka go'aansanno haddii aan isticmaalno Wi-Fi ama Bluetooth. Intaa waxaa dheer, waa inaan aragnaa haddii aan helno internetka ama barta marinka laga galo, maadaama taas la'aanteed, ku-xirnaanta wireless-ka uusan waxtar badan lahayn. Wax aan ku dhicin Bluetooth, oo aan u baahnayn internetka, kaliya aalad lagu xiriiriyo. La siiyay Labadan walxood waa inay doortaan haddii mashruuceennu qaadi doono Arduino + Wifi ama Arduino + Bluetooth.
Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa in ikhtiyaar kasta uu fiicanyahay hadii aan leenahay koronto fiican iyo helitaanka internetka, laakiin hadaanan haysan, shaqsiyan waxaan dooran lahaa Arduino + Bluetooth, oo aan u baahnayn tiknoolajiyad aad u badan iyo qeexitaannadii ugu dambeeyay keydso tamarta waana ka waxtar badan tahay adeegsiga. Adigana Teknoolojiyad noocee ah ayaa loo isticmaali karaa mashaariicdaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Arduino+Bluetooth
Dareeraha heerkulka ee Arduino
5 Mashaariic Qalab Bilaash ah oo aan ku dhisi karno qaybaha Lego